गृहपृष्ठसमाचारअर्थअन्तर्राष्ट्रियखेलकुदमनोरन्जनअन्तरवार्तासमाजफोटो फिचरसम्पर्क	You are here: HomeखेलकुदItems filtered by date: Wednesday, 19 April 2017
Wednesday, 19 April 2017 14:54	जनताले मलाई मेयरमा उठाउनु पर्छ भन्छन - रामरुप कुर्मी	वीरगन्ज बैशाख लामो समय देखि राजनीतिक मार्फत समाज सेबा गर्दै आएका वीरगन्जका रामरुप कुर्मी यस पाली नेपाली काग्रेसबाट वीरगन्जको मेयरको पदमा चुनाव लडने तैयारीमा रहेका छन । आउने दिनमा राजनितीबाट नै समाज सुधार गर्न र समाजीक बिकाश गर्नका लागी वीरगन्ज स्थित वीरगन्जका युवा रामरुप कुर्मीले वीरगन्ज उप महानगरपालिकाको मेयर पदका लागी आफु पनि उम्मेदवार को रुपमा प्रस्तुत गर्ने भएका छन । २०३६ साल देखि नेपाल काग्रेसमा आबद्ध रहदै आएका कुर्मीले हाल नेपाली काग्रेसका महा अधिवेसन प्रतिन्धिमा विजयी भएका व्यक्ति हुन । सबैको मन मस्तिष्कमा रहेका कारण उनको सफलतामा साथ दिनेहरु थु्रपै व्यक्तिहरु भेटिएका छन । उनले आफुलाई स्थानीय तहको निर्बाचनमा उम्मेदबार हुने सार्बजनिक उदघोष नगरे पनि चिया पसल र चौतारामा उनलाई वीरगन्ज उप महानगरपालिकाको मेयरमा उठाउनु पर्छ भन्ने पर्सेली नेपाली काग्रेसहरुको जमात बढदै गएको छ । उनको काग्रेस पार्टी भित्र पनि र बाहीर पनि राम्रो छवि रहेको भन्दै पार्टीमा समेत नेपाली काग्रेसको आगामी मेयर पदमा रामरुप कुर्मीनै बलियो उम्मेदबार हो भन्ने चर्चा चल्न थालेको छ । पार्टी बाट जनमतको कदर भएको खण्डमा उनले नेपाली काग्रेस बाट वीरगन्ज उप महानगरपालिकाको मेयर पदमा उम्मेदबारी सोच बनाएका छन । मेयर का आकाक्षी रामरुप कुर्र्मी संग प्रतिक्रिया लिदा उम्मेदबारी दिने आकाक्षा रहनु स्वभाबिकै हो तर जनता माझ चिनिएका र जनताको कामलाई आफनो काम भनेर लागिपरेको ब्यक्तिमा म पनि पर्ने भएकाले यतिखेर मलाई मेयरको उम्मेदबार बनाउनु पर्छ भन्नेहरुको संख्या बढेर गएको बताएका छन । उनले जुन सामाजिक संस्थामा पदिय दायित्व लिएका छन त्यसलाई बफादारीता पुर्बक निर्बाह गरेका कारण जनतामा उनको छाप राम्रो रहेको नेपाली काग्रेसका कार्यकर्ताहरुको भनाइ छ । वीरगन्ज उप महानगरपालिका को चुनावमा मेयर पदका आकाक्षी कुर्मी जिल्ला विकास समिती पर्साको सदस्य गाविस सुगैली विर्ताको पुर्व उपाध्यक्ष र जिल्ला विकास समिती पर्साको कार्यबाहक अध्यक्ष समेत जस्ता पदमा समेत रहेर काम गरि सकेका छन ।
Read more...	Wednesday, 19 April 2017 14:01	आशुतोष चर्तुवेदी फ्रन्टको अध्यक्षमा चैन वीरगन्ज बैशाख तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीको भातृ संगठन तराई मधेस युवा तराई (मधेश युवा फ्रन्टको संगठन बिस्तार भएको छ । बुधबार वीरगन्जको गोपाल मन्दिरमा बसेको बैठकले २७ सदस्य जिल्ला कार्यसमिती बिस्तार गरिएको हो कार्य समितीमा अध्यक्ष पदमा आशुतोष चर्तुवेदी बरिष्ट उपाध्यक्षमा पप्पु सिह,दिलीप साह,बिरेन्द्र कलवार छन भने सचिव राजु जैसवाल र सह सचिवमा बिकाश कुमार गुप्ता कोषध्यक्षमा बिशाल कुमार र बाकी अन्य सदस्यहरु रहेका छन । मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी पर्साका जिल्ला सचीव चन्दन मिश्रको प्रमुख आतिथ्य र नगर अध्यक्ष बिजय कुर्मीको बिशिस्ट आतिथ्यमा कार्यक्रम संम्पन भएको थियो ।
Read more...	Wednesday, 19 April 2017 13:18	हतारमा घोषणा भएको चुनावमा हिंसाको सम्भावना	– अहिलेको चुनावी माहोललाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
+ पर्सा जिल्लामा बसेर आगामी निर्वाचनलाई नियालेर हेर्दा बडो द्विविधात्मक अवस्था रहेको पाएको छु। चार हप्ता चुनावको समय बाँकी रहँदा चुनावको लागि उचित वातावरण बन्न नसकेको देखेको छु ।
– के चुनाव तोकिएकै समयमा होला त ?
+ केही भन्न नसकिने अवस्था छ, एकातिर सरकार चुनावको तयारीको सिलसिलामा मतपत्र छाप्ने, मतपेटिका एवं कर्मचारी खटाउने तर्फ केन्द्रित छ भने अर्कोतर्फ मधेसी मोर्चा सरकारसँग दाबी गरेको माग पूरा नभएकोमा बिच्केर आन्दोलनको कार्यक्रम जारी गरेको अवस्था छ। अवस्था ५०/५० छ जस्तो लाग्छ।
– चुनाव घोषणा गर्नुभन्दा पहिले सरकारले पूर्व तयारीका लागि गर्नुपर्ने कार्य गरेको छ त ?
+ निश्चितरूपले चुनाव भनेको बढीभन्दा बढी जनताको अभिमत प्राप्त गर्ने कार्यक्रम हो, यसमा सरकारले हतार गरेकोजस्तो देखिन्छ । भर्खरै सरकारले स्थानीय तहको घोषणा गरेको छ, कतिपय कर्मचारी गाउँपालिका जान पाएका छैनन्। जनतालाई चुनावबारे खासै जानकारी छैन। कुन ठाउँको लागि कस्तो मेकानिज्ममा चुनाव हुन्छ, कतिजना उठछन्, कतिजनालाई मतदान गर्ने हो, कसरी मतदान गर्ने हो यी सबै कुराको जानकारी गराउन समय कम भयो। जनताले पक्कै कठिनाई महसुस गर्नेछ। त्यसैगरी मतपेटिका समयमा छापिन्छ कि छापिंदैन, त्यसमा पनि अन्योल छ। त्यसैगरी सङ्घ, प्रदेशको निर्वाचनपछि स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा सहज हुन्थ्यो तर सरकारले बल मिचाइ गरेकोजस्तो लाग्छ। संविधानको व्यवस्था उल्टाएर पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन तोकियो। साथै मधेसको मात्र होइन, पहाडका विभिन्न जिल्लामा हजारौं मतदाताको परिचयपत्र बनाउन छुटेको छ। उनीहरूलाई सरकारले मताधिकार हकबाट वञ्चित गरेको देखिन्छ।
– चुनाव घोषणा भएसँगै पहाडमा उत्साह छ, १७ वर्षपछि स्थानीय निकायको चुनाव हुँदैछ, अब जनताले आप्mनो गाउँठाउँको नेता आफै छान्न पाउँछ, भष्ट्राचार कम हुन्छ, देशको विकासको गतिले कोल्टे फेर्छ, मधेसको बुझाइ कस्तो पाउनु भएको छ र मधेसी जनता कुन अवस्थामा छ ?
+ एकदम ठीक भन्नुभो, पहाडमा मधेस भन्दा निर्वाचनको ठाउँठाउँमा स्वागत तथा उत्सवको रूपमा लिइँदै छ। पार्टीहरूले चुनावी प्रचार र गतिविधि तीव्र पनि पारेका छन्। तर मधेसमा चुनावलाई लिएर अवस्था सामान्य नरहेको भेटेको छु, जसमा २ नं प्रदेशको ८ जिल्लामा चुनाव कुन रूपमा हुन्छ, बडो संवेदनशील प्रश्न सबैको मनमा उठने गरेको छ। मधेसी जनता अहिले पेन्डुलम बनेको छ।
– पहिलेभन्दा चुनाव सस्तो हुन्छ कि महँगो ?
+ चुनाव पहिलेभन्दा निश्चितरूपमा महँगो हुनेछ। र अबको चुनावमा रैथाने नेता कार्यकर्ताको हालीमुहाली चल्ने छैन। जोसँग पैसा र दलबल छ, उसैको प्रभाव बढी देख्न सकिने अवस्था स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रस्ट देखिन्छ। किनभने ५ देखि ८ गाविस मिलेर एउटा गाउँपालिका बनाइएको छ। पहिले ५ लाखमा एउटा गाविसमा उम्मेदवारले खर्च गथ्र्यो भने अहिले एउटा गाउँपालिकाको कम्तिमा करोड रुपियाँ खर्चिनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। त्यसैले राम्रा नेताभन्दा पैसावाला हाम्रा नेताले निर्वाचन प्रभावित गर्ने शङ्का छ।
– यस्तै अवस्था रह्यो र बिनासहमति मोर्चा चुनावमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने मधेसवादी दलका नेताहरू कुन रूपमा चुनाव लडनेछन् ?
ं यसको उत्तर दिन्न अहिले हतार होला, मेरो विचारमा त्यस्तो अवस्था नआओस्, नत्र बिनामधेसलाई खुशी पारी नेपाल समृद्धिको बाटोमा लम्कन सक्दैन, कुनै न कुनै रूपमा सहमति गराएर मोर्चालाई चुनावमा सहभागी गराउनुपर्ने अधिकाश नेपालीको धारणा छ।
– पर्सा, बारामा कुनकुन पार्टीले कुन रूपमा चुनावी प्रचारप्रसार अगाडि बढाएका छन् ?
+ पर्सा बारामा काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी पहाडी जिल्लाभन्दा अलि मध्यम किसिमले चुनावी गतिविधि सञ्चालन गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि मधेसवादी दल पनि चुनावलाई मध्यनजर गर्दै पार्टी प्रवेश, चियापान, अन्तक्र्रिया, छलफललगायत कार्यक्रम जारी गर्दैछन्। भोलि चुनावमा जानैपर्ने अवस्था आयो भने भित्रभित्रै सबै पार्टीले तयारी चाहिं गरिरहेका छन्। तर अवस्था सहज र उत्साहप्रद देखिएको छैन।
– सरकारले के गर्दा चुनावको माहोल बन्थ्यो त ?
+ सबैभन्दा पहिले मोर्चासँग वार्ता गरी सहमितमा ल्याउनुप¥यो, त्यसपछि सहमतिका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुप¥यो, मधेसमा निर्वाचन क्षेत्र बढ्यो भने मधेसी पार्टीलाई मात्र फाइदा हुँदैन, काङ्ग्रेसी, एमालेवादी र माओवादी पार्टीका नेताहरूलाई पनि फाइदा हुन्छ । सङ्घीयता मुख्य मुद्दा मोर्चाले अघि सारेको छ, त्यसमा पनि सरकारसँगै एमाले सहमतिको लागि वातावरण बनाएर संविधान सशोधन मार्फत् मधेसको विभिन्न आन्दोनलका मर्मलाई सम्बोधन गर्दा मधेसवादी दल चुनावमा आउने छन्।जसले गर्दा चुनावको माहोल सहज होला ।
सरकारले जारी गरेको ७४४ स्थानीय तहको निर्वाचन यही वैशाख ३१ गते समय तोकेको छ।जारी भएको संविधानलाई मूर्तरूप दिन एक वर्षभित्र स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ काङ्ग्रेस –माओवादी गठबन्धनको सरकारले निर्वाचन मिति तोकेको हो।निर्वाचनलाई विपक्षी दल एमालेले सकारात्मकरूपमा लिएको छ भने जारी संविधानमा सङ्घीयता, निर्वाचन क्षेत्र एवं नागरिकतालगायत विषयमा असन्तुष्टि राख्दै मधेसवादी दलहरू आन्दोलनको कार्यक्रम जारी गर्दै चुनाव बहिष्कार तथा बिथोल्ने दाउमा छन्। यसैबीच आगामी निर्वाचनबारे राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरसँग हाम्रा सहयोगी राधेश्याम पटेलले गरेको कुराकानीको सङ्क्षिप्त अंश यसरी प्रस्तुत गरिएको छ।	Published in
राजनीति Read more...	Wednesday, 19 April 2017 13:10	वीरगंजप्रति पूर्वाग्रह किन ? ओमप्रकाश खनाल	वीरगंज आर्थिक आधारका सन्दर्भमा मात्र नभएर राजनीतिक दृष्टिले पनि रणनीतिक महŒवको स्थान हो। निकट एक वर्षको अर्थराजनीतिक परिदृश्यको स्मरण यसको प्रमाणिकताका निम्ति पर्याप्त हुन सक्छ। यसो त आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य रुचि अवतरणको औजारस्थल पनि यही क्षेत्र बनेकोमा किन्तु–परन्तु आवश्यक परेन। प्रकारान्तरले यी सबै दृश्यावलीले वीरगंज र यस क्षेत्रको आर्थिक–राजनीतिक विशिष्टतालाई नै पुष्टि गरिराखेका छन् । तर विडम्बना यो विशिष्टताको दोहन आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक समृद्धिका निम्ति हुन सकेको छैन। दुनो सोभ्mयाउने सन्दर्भमा मात्र बढी दुरुपयोग भएको छ। यो सिङ्गो अर्थतन्त्रकै लागि अभिशाप बन्ने खतरा निकट देखिएको छ। अर्थराजनीतिमा यसका सतही आयामहरू देखा परिसकेका छन्।
Read more...	Wednesday, 19 April 2017 13:07	नियुक्तको बिषय लिएर नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा प्रदर्शन गर्ने चेताउनी	वीरगन्ज बैशाख नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समितिबाट अस्थायी नियुक्त भएर बरखास्त भएका कर्मचारीहरूले पुनर्बहालीको माग गर्दै अस्पताल प्रशासनलाई अनावश्यक तनाव दिइरहेका छन् । उनीहरूले रीतपूर्वक नियुक्ति भएको भन्दै अस्पतालमा आन्दोलन तथा प्रदर्शन गरी पुनर्बहालीको माग गर्ने तयारी गरेको अस्पताल स्रोतले बताएको छ । तर अस्पताल प्रशासनले त्यसो नगर्न उनीहरूसँग आग्रह गरेको छ । नियुक्ति रीतपूर्वक नदेखिएकोले चिकित्सक, नर्स, अनमी, कार्यालय सहयोगी गरी केही दिन पहिले १० जना कर्मचारीहरूको अस्पताल विकास समितिले नियुक्ति बदर गरेको थियो । यस विषयमा अस्पतालका मेसुदेखि अन्य कर्मचारी पनि चिन्तित छन् । यदि त्यस्तो किसिमको गतिविधि उनीहरूले गरे भने अस्पताल सञ्चालनमा हस्तक्षेपकारी भूमिका बढने अस्पताल प्रशासनको ठम्याइ छ । अस्पतालका मेसु डा. चित्तरञ्जन साहले नियुक्ति बदर भएका कर्मचारीहरू अस्पतालमा प्रदर्शन गर्ने तयारीमा रहेका तर कुनै किसिमको गतिविधि नगरेको जानकारी गराए । उनले भोलि–पर्सि के हुन्छ जानकारी नभएको बताए । यदि कसैले कानुनको दायरा मिचेर अस्पताललाई बन्धक बनाउन खोज्यो भने प्रहरी प्रशासनको सहयोग लिने अस्पताल विकास समितिका पदाधिकारीहरूले बताएका छन् ।
Read more...	Wednesday, 19 April 2017 12:23	बीरगंजमा एमालेबाट मेयरको टिकट पाउनेमा चौधरी र भण्डारी भन्दा कुर्मी भारी बीरगंज बैशाख । नेकपा एमालले बीरगंज उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि आफ्ना उम्मेदवारहरुको नाम सिफारिश गरेको छ । बीरगंज नगर कमिटीको सम्पन्न बैठकले मेयरमा निर्मला देवकोटा सुन्दर कुर्मी र मनोज चौधरीको नाम सर्वसम्मत रुपमा सिफारिश गरेको हो । मेयरमा सिफारिश निर्मला भण्डारी अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय सदस्य हुन । त्यस्तै सुन्दर कुर्मी एमालेको जनसंगठन लोकतान्त्रिक मेधशी संगठन पर्साको अध्यक्ष हुन कुर्मी चौधरी र भण्डारी भन्दा भारी पर्ने छन र कुर्मीलाई नै मेयरको टिकट दिनुपछ भन्ने एमाले भित्र चर्चा चलेको छ । मनोज चौधरी नेकपा एमाले केन्द्रीय बिभागको सदस्यका रुपमा कार्यरत छन । एमालले बीरगंज नगर २७ वडा मध्ये १७ वडामा अध्यक्षका प्रत्याशीहरुको पनि नाम सिफारिश गरिसकेको नेकपा एमाले पर्साका संयोजक प्रभू हजारले बताए । बैठक एमाले नेता उसमान अन्सारीको अध्यक्षतामा बसेको थियो ।